SEENAAN HINDAGATUU !!! – Welcome to bilisummaa
SEENAAN HINDAGATUU !!!
bilisummaa May 2, 2014	Leave a comment
Isin abaan biyaa,
Saba keetif jetee,
Hara baate biyaa,
Ati lafee kiyaa.
Lamii keetiif jetee,
Kan gamanaaf gamaa,
Fincila iti fuftee,
Gaafii iti kaastee,
Kaneen biroo amoo,
Mana hidhaati guuramtee,
Gochaa kan keesanii,
Saba ksaniif checha,
Kan biyee taatanii,
Womaa isiniif hingoonee,
Baka isinoo bu’uf,
Dhaamsi isiniif qabu,
Kaneen lubuun haftan,
Mana hidhaa jirtan,
Rabbi isin haamaaruu,
Kan qe’eti haftanii,
Fincila iti fuftanii,
Diina gidiruu irati,
Yoo rabiraa taate,
Isinii woliinii !!!!
INJIFANOON LAMII OROMOOF !!!!!
Previous OMG!!! Buraayyuu keessatti abiddi cimaan qabatee jira!!!
Next HAATI DHIIRA HINBOOTTU, GUYYAAN GAHEE